Root sy fanarenana amin'ny Samsung Galaxy S2 Hercules | Androidsis
Ao amin'ny lesona manaraka miaraka amina video tutorial, hanazava ny fomba fametrahana ny fanarenana novaina aho ary hamaka ilay maodely Samsung Galaxy S2 Hercules T989.
Ity lesona fampianarana ity dia natao ho an'ilay maodely T989 araka ny efa nolazaiko teo aloha, ary mety mihazakazaka ny firmware T989UVLE1, raha tsy anao io dia tsy maintsy manambany terminal alohan'ny hanaovana an'ity tutorial ity.
Nanapa-kevitra ny hamorona ity lesona torolalana na torolàlana manazava ity aho, noho ny fangatahana izay tonga taminay avy amin'ny hafa Tambajotra sosialy Androidsis.
1 Fepetra takiana mba hanatanterahana an-tsitrapo
2 Fomba fanarenana sy Root flashing
3 Ahoana no hanorohana
Fepetra takiana mba hanatanterahana an-tsitrapo
Manana a Samsung Galaxy S2 Hercules modely T989
Windows 7 na Windows XP solosaina, mpampiasa Windows Vista dia mety manana olana.
Nametraka tsara ireo mpamily finday.
Ampidino ireo rakitra ilaina.
Fomba fanarenana sy Root flashing
Ny voalohany indrindra dia ny fametrahana ireo mpamily ilaina mba hahafantaran'i Odin tsara ilay fitaovana, raha toa ka manana Kies napetraka isika ary efa nampifandray ny finday hatrizay dia efa hapetraka izy ireo, raha tsy afaka misintona isika Kies de Pejy ofisialy Samsung ary hametraka.
Safidy hafa manan-kery ihany koa dia mandehana amin'ity fampianarana ity ary apetaho ireo mpamily fa tsy mila apetraka akory Kies.
Raha vantany vao tafapetraka ireo mpamily ilaina, ampifandraiso amin'ny terminal ny terminal anay mba hamaranana ny famindrana ireo mpamily, afaka manohy ny fampianarana amin'ny apetraho ny fanarenana ary hamaka izany.
Izahay dia mamaha ny zotram-pifandraisana miaraka amin'ireo fitaovana ho an'ny terminal manelatselatra ary ao anatiny dia hahita rakitra telo isika:
Mihazakazaka amin'ny maha-mpitantana anay izahay, manindry ny bokotra ankavanan'ny totozy, ny programa Odin ary ny varavarankely toa ilay aseho etsy ambany dia hiseho:
Izao dia tsindrio ny bokotra PDA ary safidio ny fisie .tar izay misy ny Fanarenana voaova ary mampidina mialoha izahay, manamarina fa ny zava-drehetra dia toy ny sary miraikitra:
Avy amin'ny Samsung Galaxy S2 Hercules ampiasainay amin'ny fikirakirana ny Famafana USB ary vonoinay tanteraka ny telefaona, esory ny bateria mandritra ny folo na dimy ambin'ny folo segondra ary averinay.
Hodinihintsika izao ny telefaona Maody Downlod, noho izany dia hihazonantsika ny lakilen'ny miakatra more midina ambany dia hampifandraisinay amin'ny solosaina izy io nefa tsy hamotsika ireo lakile voalaza etsy ambony ary hiandry Odin manaiky antsika ny terminal.
Raha vao ekena, ny teny COM arahin'ny isa iray, amin'izay fotoana izay dia manamarina izany indray isika Odin Izy io dia araka ny asehoko amin'ny sary mifatotra, indrindra ilay boaty RE-PARTITION tsy tokony ho voafidy.
Ankehitriny dia tsy maintsy tsindrio fotsiny ny bokotra Start (3) ary miandry ny famaranana ny fizotrany. Tsy haharitra roa minitra mahery akory isika izao.
Vantany vao vita aho Odin hitatitra anay ny Pass ary hiverina indray ny telefaona, izao no fotoana ahafahantsika mamaka azy io.
Ahoana no hanorohana
Hanao faka al Samsung Galsaxy S2 Hercules tsy maintsy maka tahaka ny rakitra root.zip izay nalainay teo aloha isika, nefa tsy mamoaka mivantana ny fakan'ny fahatsiarovana anatiny, dia averinay ny Famafana USB avy amin'ny toe-javatra ary avereno amin'ny maody fanarenana amin'ity indray mitoraka ity.
Mba hidirana amin'ny maody fanarenana, tsindrio ary tazomy ireo bokotra miakatra more midina ambany miaraka amin'izay dia tsindrio ny bokotra Power.
Indray mandeha ao amin'ny Recovery hanaraka ireto dingana ireto izahay:
Niditra izahay Backup & mamerina sy mifantina ilay safidy nomaniny ho solon'izay manao a Nandroid Backup amin'ny rafitray iray manontolo tahaka ny ananantsika izao, dia hanampy antsika hanana kopia voafafa sy hahafahana mamerina azy io raha misy olana.
Mametraka zip avy amin'ny sdcard anatiny
Misafidy ny rakitra root.zip izay nalainay taloha ho an'ny fahatsiarovana anatiny izahay ary manamafy ny fametrahana azy.
Amin'izany no hametrahantsika ny fanarenana novaina ary hiorina amin'ny faka Samsung Galaxy S2 Hercules modely T989 .
Fanazavana fanampiny - Sintomy ny mpamily USB Samsung ho an'ny telefaona finday. Veloma ry kies
Sary - Galaxy S2Root.com (sary farany)
Ampidino - Fitaovana ilaina, Samsung Drivers
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Android Root » Ahoana ny fametrahana ny fanarenana sy ny root amin'ny Samsung Galaxy S2 Hercules T989
bibilava dia hoy izy:
Ahoana no ahalalako izay Firmware ananako?
rehefa te-hahita azy amin'ny sela aho ... tsy mandefa sms amiko izy
Valiny amin'ny bibilava
Tena tsara ny hafatrao tiako be io ary hazavao tsara fa na ny ampondra be indrindra aza dia mahatakatra izany XD arahabaina!
Te hahafantatra aho raha rehefa manamboatra ireo fanovana ireo amin'ny findaiko aho, moa ve very ny fampahalalana avy amin'ny fitadidiako anatiny?
Guillermo Velazquez Ramirez dia hoy izy:
Ahoana no ahafahako miditra indray amin'ny maody fampidinana aorian'ny fanavaozana ny fanarenana? Havaozy ny terminal ahy araka ny nolazainao fa izao rehefa te hiditra ny maody fampidinana aho dia miditra amin'ny fanarenana ary te-hanavao ny jelly bean satria manana ICS, ny valinao hanampy ahy betsaka Misaotra.
Valiny tamin'i Guillermo Velazquez Ramirez
Juan De ANDRIAMANITRA dia hoy izy:
Ry anti-dahy, tsy afaka misintona na inona na inona eto ianao azafady raha tsara fanahy ianao dia apetraho ny rohy fivarotana orinasa malalaka na fomba iray handefasana izany amin'ny hercules galaxy S2 SGT989 misaotra anao atoandro atoandro antenaiko fa ny valinteninao
Valiny tamin'i Juan De DIOS